Ny hatsaran-tarehy sy ny korontana ao amin'ny sarin'ny Milk | Famoronana an-tserasera
Pang Maoukun nitondra anay amin'ny fomban'ny vehivavy mitady ny fahatsorana ary amin'ny fanetren-tena dia mijery zavatra iray hanehoana ny heviny ary mamaritra ny ampahany amin'ny fombany. SajediFa kosa, mitondra antsika eo alohan'ny olon-tsy fantatra izy ary saika mivoaka amin'ity vehivavy eto an-tany ity izay manindrona ny rindrina ny masony fa tsy ilay jereny.
Handeha vehivavy fahatelo isika ny fomba fijery mikorontana sy tsy azo ovaina indrindra avy amin'i Soey Milk. Tsy dia milamina sy marevaka kokoa amin'ny saripika manjavozavo, na dia miresaka momba ny abstraction sy photorealism aza izy ireo. Jery ​​tsy mitovy amin'ny sary sy seho samihafa afaka manome ny karazana mozika rehetra.
Iray amin'ireo mahazatra ny asany dia ny hatsarana ny vehivavy izay mety ho hitantsika amin'ny sombiny tsirairay. Hatsaran-tarehy mifanohitra amin'ireo lamina sy loko izay manandrana milalao amin'ny fahatsapana hafa sy ny famaranana. Eto i Milk dia afaka mahita fandanjalanjana hafahafa izay ezahiny hitondra ny réaliste sy ny réalistisme amin'ny sary any an-kafa.
Ny lokon'izy ireo misarika ny saina ary mampiseho talenta be dia be izy ireo amin'ny fampifangaroana endrika izay miavaka ilay maodely ho mpiorina lehibe indrindra amin'ny sanganasa tsirairay. Ny sangan'asan'ny Milk dia mifantoka amin'ny endrika vehivavy, manasongadina ny fiolahana sy ny fikajiana izay ampiana ampahany amin'ny erotisma, ary na dia marim-pototra aza ny antsipirihany ao anatin'io firaketana io, dia ialana mivantana izy ireo rehefa mifantoka amin'ny zavatra rehetra manodidina azy ireo.
Miaraka amin'ny nostalgia sy malefaka, misy ihany koa ny hatsiaka ao amin'ilay hatsaran-tarehy saika tonga lafatra izay afaka manome topy maso zavatra tsy misy akora sy izay azontsika ampitaina.
Ianao dia manana ny facebook-nao y ny bilaoginy afaka manaraka akaiky ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ronono sy ny vehivavy tsara tarehy nolokoina mitady ny korontana sy izay manjavozavo